MISS CALL မ၊ BILL ခိုး မ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » MISS CALL မ၊ BILL ခိုး မ
MISS CALL မ၊ BILL ခိုး မ
Posted by black chaw on Oct 11, 2011 in Creative Writing, Think Different | 17 comments
BLACKCHAW ရေးတဲ့ ဟိုမရောက်ဒီမရောက် သရော်စာ
ဘလက်တို့ နေထိုင်ပျော်မွေ့လျှက်ရှိသော ဂဇက်ကုန်းသည်ကား ဟန်းဖုန်းလေးတစ်လုံးမှ မကိုင်နိုင်လျှင် လူရာမ၀င်သော ကာလကိုရောက်ရှိနေသော အခါသမယပါတည်း။ ဆိုက်ကားနင်းရင်း ဖုန်းပြောနေသော သူလည်းမရှား၊ ငါးရောင်းရင်း ဖုန်းပြောနေသူလည်း မရှား၊ ယုတ်စွအဆုံး ပဲပြုတ်သည် အချို့ ပင် ဖုန်းကိုင်နိုင်သော ဒီမိုကရေစီ အစိုးရ ခေတ်ပင်ဖြစ်ပါ၏။ ခေတ်နှင့် အညီ ဘလက်၏ တူနှစ်ယောက်နှင့် တူမ တစ်ယောက်သည်လည်း ငါးသိန်းတန်ဟန်းဖုန်းကို စတိုင်ကျကျ ကိုင်လျက်သာရှိနေကြပါ၏။ ၄င်းတို့မှာ ၀င်ငွေ အတန်အသင့် ကောင်းသော ကုမ္ပဏီ ၀န်ထမ်းများဖြစ်ကြပါ၏။
တစ်နေ့သားမှာဖြင့် ဘလက်၏ ခေတ်ဟောင်းဖုန်းကြီးဆီသို့ ဖုန်းလာသည့်အသံကို ကြားရပါ၏။ ထုံးစံအတိုင်း ချက်ခြင်း ဖုန်းကိုင်လေ့မရှိသော ဘလက်မှာ ဘယ်သူဆက်တာလဲဆိုသည့် သဘောနှင့် ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်မိရာ တူမတော်ဒေါ်လာစား ၏ ဖုန်းဖြစ်နေပါသည်။ သို့ပေသော်လည်း တစ်ချက်သာမြည်ပြီး ပြန်ကျသွားပါ၏။ ဘလက်လည်း ပြန်ခေါ်လိမ့် မှာပဲ ဆိုပြီး အိတ်ထဲပြန်ထည့်ထားမိ၏။
ဖုန်းက ထပ်မြည်လာပြန်၏။ တစ်ချက်သာ မြည်၍ ကျသွားပြန်၏။ သြော်တူမတော် တစ်ယောက် ဦးလေးဖြစ်သူ ဘလက်ကို ဖုန်းခေါ်ရခက်နေသည့်ထင့်။ ခေါ်လိုက်၊ ကျလိုက် ဖြစ်နေပါ၏။ ဘလက်လည်း ပြန်ခေါ်မှဖြစ်တော့မည်ဆိုသော အတွေးဖြင့် တူမတော့် ဖုန်းကို ပြန်ခေါ်လိုက်၏။ မခက်ပါ။ တစ်ချက်တည်း နှင့် ဖုန်းဝင်သွားပါ၏။
“ အန်ကယ်ဘလက်လား၊ သမီးပါ “
“ အေး ပြောသမီး ဘာကိစ္စ ရှိလဲ “
“ ညနေ သမီးကို ၀င်ကြိုပေးလို့ရမလားလို့ပါ”
“ အော်အေး ရပါတယ်ကွယ်၊ သမီးဖုန်းက အန်ကယ့်ဖုန်းကို ခေါ်ရခက်နေတယ်ထင်တယ် “
“ မဟုတ်ပါဘူး၊ သမီးက အန်ကယ့် ကို Miss call ပေးလိုက်တာပါ၊ ဖုန်းဘေလ်ကုန်သွားမှာစိုးလို့ အန်ကယ်ရဲ့ အဲဒါကြောင့် အန်ကယ် ဖုန်းပြန်ခေါ်နိုင်အောင် Miss call ပေးလိုက် တာပါ “
သြော် ခင်ဗျာများ နှမြောရှာပေမပေါ့၊ ဖုန်းဘေလ် ကုန်မှာစိုးလို့ Miss call ပေးတာပါတဲ့။ ဘလက်၏ ဖုန်းကား အကြွေးဆောင်လို့ရသော ခေတ်ဟောင်းဖုန်းကြီးဆိုတော့ သူတို့လက်ငင်းဖုန်းတွေလို ကုန်လို့ကုန်မှန်းမှ မသိသာတာ။ ဘလက်ခွင့်လွှတ်ရမှာပေါ့။
မကြာပါ ဖုန်းသံမြည်လာပြန်ပါသည်။ တစ်ချက်မြည်ပြီး ကျသွားပြန်ပါ၏။ တူတော်မောင် အကြီး၏ ဖုန်းဖြစ်နေပါ၏။ သူလည်းဖုန်းခေါ်ရ ခက်နေပြန်သည်ထင့်။ တစ်ချက်မြည်လိုက် ကျလိုက်ဖြစ်နေ၏။ ဘလက် ပြန်ခေါ်လိုက် သောအခါတွင်တော့ တစ်ချက်တည်းနှင့် ၀င်သွားပါလေ၏။
“ အန်ကယ်ဘလက်လား၊ ဖိုးသားကြီးပါ “
“ အေး ဘယ်လိုအကြောင်းကိစ္စတွေများ ရှိတော်မူပါသလဲကွယ် “
“ သား ညနေ အိမ်ပြန်နောက်ကျမယ့် အကြောင်းပြောချင်လို့ပါ၊ နောက်ပြီး ဒီည ညစာစားပွဲ ရှိနေလို့ အိမ်မှာ ထမင်း မစားတော့ဘူးလို့ အန်တီ့ ကို ပြောပေးဘို့ပါ “
“ အေးအေး ဒါနဲ့ သားဖုန်းက အန်ကယ့် ကို ခေါ်ရခက်နေတယ် ထင်တယ် “
“ ဟဲဟဲ သားဖုန်းက တစ်သောင်းကဒ်ပဲထည့်ထားလို့ ဖုန်းဘေလ်က နည်းနေတယ်လေ၊ အဲဒါကြောင့် အန်ကယ့် ကို Miss call ပေးလိုက်တာပါ “
တော်တော် ခေတ်စားသော Miss Call ပါတကား။ အေးလေ သူတို့ ဖုန်းဘေလ်လေးများ ကုန်သွားရင်ခက်ရချည့်။ ဘလက် ၏ ဖုန်းကား ဘာပူစရာရှိသနည်း။ အကြွေးပြောရတာပေပဲ။ ဘေလ်ထွက်မှ ပေးရတာ။ကိစ္စ မရှိလှပါ။ ဘလက် အနစ်နာခံရမည်ပေါ့။
မကြာပါ။ ဘလက် ၏ ဖုန်းထဲသို့ မက်ဆိတ်ခ်ျ တစ်စောင် ၀င်လာပါ၏။ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့
ဟူသတတ်။ တူတော်မောင် အငယ်၏ ဖုန်းမက်ဆိတ်ခ်ျ ဖြစ်ပါ၏။ သူ့ခမျာ ဖုန်းခေါ်ရခက်နေရှာသည်ထင့်။
ဘလက် ချက်ခြင်း ဖုန်း ပြန်ခေါ်လိုက်ပါ၏။ အလယ်တကူပင် ၀င်ပြန်ပါ၏။
“ အန်ကယ် ဘလက်၊ ဘယ်ရောက်နေလဲ “
အံမယ် သူက ကိုယ့်ကိုတောင် ပြန်စစ်ဆေးနေသေး၏။
“ မြို့ထဲမှာ၊ ပြော ဘာကိစ္စ ရှိနေလဲ “
“ အန်ကယ့် ဆီက ကားခဏယူသုံးချင်လို့ပါ “
“ ဘာ သုံးချင်လို့လဲ “
“ မနက်ဖြန် သားသူငယ်ချင်း မင်္ဂလာဆောင်မှာ ကားကူညီပေးချင်လို့ပါ “
“ အေး မနက်လာယူလေကွာ၊ ရပါတယ် “
“ ဟုတ်ကဲ့ အန်ကယ်ဘလက် ဆီလေးပါတစ်ခါတည်း စပွန်ဆာပေးနော် ကျေးဇူးပဲ “
“ ဒါနဲ့ မင်းလည်းဖုန်းဘေလ် ချွေတာပြီး massage ပို့လိုက်တာလား “
“ ဟားဟား အန်ကယ်ဘလက်ကြီးက ခေတ်မှီလိုက်တာ၊ ဘယ်လိုလုပ်သိနေတာလဲ “
ဘလက် အံ့သြတကြီး အံ့သြမိနေပါ၏။ ဖုန်းတောင် ငါးသိန်းပေးပြီး ကိုင်နေကြပြီပဲ။ ဘာမဟုတ်သည့် ဖုန်းဘေလ်ကိုကျမှ နှမြောနေကြ၏။ သိတ်တော့ မဟုတ်လှပါ။ အေးလေ သူတို့က ကလေးတွေပဲ။ သို့နှင့် ဘလက် တစ်ယောက် အိမ်ပြန်ရောက်ခဲ့ပါပြီ။
ဘလက်၏အိမ်ကား သာပါ၏။ ထို့ကြောင့် ဧည့်မပြတ်ပါ။ အခုလည်း အစ်မကြီး မိသားစု ရောက်နေပြန်ပါ၏။ အစ်မကြီး၏ အမျိုးသားကား အညာမြို့လေးတစ်မြို့မှ အစိုးရ၀န်ထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ပါ၏။ မအားလပ်သဖြင့် ပါမလာဟု ဆိုသည်။ သို့နှင့် ဘလက်ထမင်းစားပါလေ၏။ နှစ်လုပ်သုံးလုပ်ပဲစားရသေး၏။ လိုင်းဖုန်းကထမြည်၏။ မဒမ်ဘလက်က ထကိုင်ရန် ပြင်၏။ အစ်မကြီး ကဦးသွား၏။ ငါ့ ယောင်္ကျား ဖုန်း ဟုလည်းသေချာပေါက်ပြောလိုက်သေး၏။ သူ့ယောင်္ကျားလည်း ခေတ်နှင့် အညီ ဖုန်းကိုင်နေဟန်တူပါသည်။
“ ယောင်္ကျားရေ၊ ဖုန်းချလိုက် ဒီက ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် “
လာပြန်ပြီ ဗားရှင်းတစ်မျိုး။ ဘလက် နားမလည်သေးပါ။ ဖုန်းလည်း ချိတ်မိနေပါလျက်နဲ့ ဘာလို့ ချခိုင်းပါလိမ့်။ ဘာလို့ ပြန်ခေါ်ပါလိမ့်။ သို့နှင့် အစ်မကြီး သူ့ယောင်္ကျား ကို ဖုန်းပြန်ခေါ်၏။ ဖုန်းပြောကြသည်မှာ နာရီဝက်ခန့် ကြာ၏။ ဘလက်တို့ ထမင်းစားပြီး အိမ်ရှေ့ ၀ရံတာထွက်တာတောင် ပြောကောင်းတုန်း။ ဖုန်းချပြီးသော အခါ အစ်မကြီးကို ဘလက် question ထုတ်၏။ ဘာလို့ ဖုန်းပြန်ခေါ်တာလဲ ဟူ၍။
“ ငါ့ ယောင်္ကျား ဖုန်းဘေလ် ကုန်မှာ စိုးလို့ပါ။ ဒီမှာက လိုင်းဖုန်းမဟုတ်လား။ တော်သေးတာပေါ့ “ ဟူသတတ်။
သြော် သူတို့ ဖုန်းဘေလ်ကျတော့ ကုန်မှာ ကြောက်ကြပြီး၊ ဘလက်တို့ ဖုန်းတွေကား အလကားရနေသည်များထင် နေကြသလား မသိ။ Miss Call ပေးတဲ့သူက ပေးကြသည်။ Please Call ဆိုပြီး စာပို့သူက ပို့ကြသည်။ ဖုန်းချခိုင်းပြီး ပြန်ခေါ်သူက ခေါ်ကြသည်။ ဖုန်းဘေလ် အကုန်မခံချင်ပါဘဲလျက် ဖုန်းသုံးချင်ကြလေသူ ဘလက်၏ ဆွေမျိုးများပါတကား။
သူတို့အတွက် ဘလက်မှာ စိတ်အနှောက်အယှက် ကြီးစွာ ဖြစ်ရပါ၏။ ၄င်းတို့ကား သူတပါး ဖုန်းဘေလ်ကို ခိုးယူနေကြသူများသာ ဖြစ်ပါ၏။
ထို့ကြောင့် ဘလက်က သူတို့အား ချစ်စနိုးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဆဲရေးလိုက်ချင်ပါတော့သည် တမုံ့တကားတည်း။
Miss Call မ
Bill ခိုး မ
(သီတင်းကျွတ်မှာ ရွာသူရွာသားတွေ အိမ်ထောင်ရှိရင်လည်း မိသားစုနဲ့
အိမ်ထောင်မပြုတော့ဘူးဆိုရင်လည်း တူတွေ တူမတွေ ကန်တော့တာ ခံယူရင်း
အပေါင်းအသင်းထဲမလဲ..အရက်ဖိုး မလောက်လို့ ..လှမ်းခေါ်ချင်တာတောင်..
အရင် စမခေါ်ဘူး..မစ်စ်ကော ပေးလိုက်..မက်စိ ပို့ လိုက်နဲ့ ….
Miss Call guy လို့
အဲဒီအထာတွေ သိနေပြီဆိုရင် နောက်တစ်ခါ ကိုယ်က ပြန်မခေါ်နဲ့ပေါ့ ဦးဘလက်ချောကြီးရဲ့ ………
ပေါက်ပေါက်လဲ နောက်တစ်ခါ မစ်ကောနဲ့ မက်စိပို့တဲ့သူကို မက်စိနဲ့ အရက်ပုလင်းပုံလေး ပြန်ပို့ပေးလိုက်ပေါ့ ….
ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးတွေ ရှိစေချင်တာပါ meelay ရေ။
သူတို့ကို အကူအညီပေးရမယ့် ကိစ္စမျိုးတွေကိုတော့ miss call မပေးသင့်ဘူးလေ။
ပေါက်ဖေါ်ကြီးမန်းထားတာ လိုပေါ့။ အရက်ဖိုးရှင်းပေးဘို့တောင် miss call ပေးတယ်လေ။
စုံစုံ့ မောင်လေးကတော့ မောင်နှမတွေပဲကွယ်။ သည်းခံရမှာပေါ့။
ဒီပို့စ်လေးက အပျော်သဘော ရေးလိုက်တာပါ။ ဖတ်ပြီး ပြုံးမိတယ်ဆိုရင်ပဲ ကျေနပ်ပါတယ်။
ဒါဆိုဒီလိုလုပ်ပါလား ကိုဘလက်ချောရဲ့ သူက Miss Call ပေးရင် ကိုယ်ကလည်း
သူ့ကို Miss Call ပြန်ပေးလိုက်ပေါ့ အဲတော့ ကျေသွားတာပေါ့ ……….
ခလေးတွေ ဘဲလေကျောင်းမုန့် ဖိုးနဲ့ ဘီလ်ပါဆောင်ရရင်ပေါ့..မုန့် ဖိုးပေးသလိုဘဲပေါ့
miss call ပေးရင်လုံးဝပြန်မဆက်တတ်တာသိအောင်ပြသတယ်။
မက်စေ့ ပို့ ရင်..Please call me….massageဘဲပြန်ပို့ မယ်-25/ဘဲလေ
ဒါဆိုနောက်လည်း..သူတို့ လည်းလုပ်ရဲ မှာမဟုတ်ဘူး…
(ကျနော်တို့ လည်းလေ လှိုင်းကြားကဘဲ..ဂေဇတ်ထဲ ကကြီးသူလို့ ထင်ရသူတိုင်း
အဲလို မစ်ကောလ် ၀င်ရင်မနေနိုင်ဘူး
မသိတဲ့ဖုန်းဖြစ်ဖြစ်သိတဲ့ ဖုန်းဖြစ်ဖြစ် ပြန်ခေါ်ခြင်တာ လက်ကိုယားနေတာ
အခုမှသိတယ် ဒါကြောင့် ကျုပ်ဖုန်းကဒ်ဖိုး တစ်လ နှစ်သောင်းဝယ်နေရတာကို
နောက်များမစ်ကောလ် လာလို့များကတော့..ဟင်းဟင်း သိမယ်။။။
ရင်းတုန်းလေးပါ ပြောင်းထားလိုက်ဗျို့ 
“ မကိုင်ဘူးကွာ ၊ မကိုင်ဘူးကွာ ” ဆိုတဲ့ ဟာလေး ပေးထားကြည့်ပါဗျို့ 
ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့ တော့ကွက်တိပဲဗျို့ ။ ငါးသိန်းဖုန်းတွေပေါ်မှ အဆက်အသွယ်က ပိုပြန်နေသလိုပဲ။ပီစီအိုဖုန်းခေတ်ကမှ လမ်းဘေးကနေ၁၀၀ဖိုးလောက်ဖုန်းပြောကြသေးတယ်။အခုတော့ မဟုတ်ပေါင်။
ဟီးဟီး … ကိုချောကလက်ကြီးက အမှန်တွေသိပ်ပြောတာပဲ… ။ အဲ့ဒါတွေက လုပ်နေကြ …
etone ဆို … အမေနဲ့ ဖုန်းပြောချင်လျှင် missed call ပေးလိုက်တယ် …. တွေ့တော့ သူပြန်ခေါ်တယ် … ဟဲဟဲ .. ရုံးမှာရှိနေတဲ့ အချိန်သူခေါ်လျှင် ချလိုက် ချလိုက်ဆိုပြီး .. ကိုယ်က ပြန်ခေါ်ပေးတယ် …
ဘဲနဲ့ကတော့ … SMS ပို့ဖြစ်တာ များတယ် … ကြာကြာနဲ့ ရှည်ရှည်ရိုက်ရမှာ လက်ညောင်းတော့ … အလွန်ဆုံး သုံးလေးစောင် အပြန်လှန်ပဲ … ။ စကားပြောလိုက်လျှင် အနည်းဆုံး ငါးမိနစ်ဆိုတော့… SMS က ပိုတွက်ခြေကိုက်တယ်
ပြောမယ့်သာပြောတာ.. ဖုန်းဘေလ်တွေ အားလုံး ပေါင်းလိုက်လျှင် နှစ်တွေများလာတဲ့အခါ .. ဖုန်းတလုံးစာလောက် တက်သွားနိုင်တာကိုး
ဟားဟား etone တောင် ၀န်ခံသွားပြီ pan pan ရော miss call မ ပဲလား???????????
moonpoem တောင် သိတယ်။
လမ်းဘေးကဖုန်းကို ၁၀၀ ပေးဆက်ကြပြီး ဟန်းဖုန်းကျမှ ၅၀ နှမြောသင့်သလားနော။
ဘီလူးကြီးလည်း Miss call ဒါဏ် ခံဘူးတာပဲ။
အခုခေတ် ချာတိတ်တွေ စကားပြောရင် နည်းနည်း နားစွင့်ကြည့်လိုက်။
ကျွန်တော်တို့တုန်းက ငါရောက်ခါနီးရင် ဖုန်းခေါ်လိုက်မယ်လို့ ပြောခဲ့ကြတယ်။
ငါရောက်ခါနီးရင် MISS CALL လှမ်းပေးလိုက်မယ်တဲ့။
Miss call guy တစ်ယောက်ရှိသေးတယ် ။ သူက ဘာလို့ခုထိ တက်မလာသေးတာပါလိမ့် ။
ဒီနေ့တော့ Miss call မလုပ်သေးဘူး ၊
ဟေ့လူ ကြားရင် Miss call လေး လုပ်ပါဦး ။
ဘလက်ချော ဒီပို့စ်ကို သရော်စာ ခေါင်းစဉ်တတ်ထားပါတယ်။
ကား၊ အိမ်၊ ဖုန်း ကိစ္စ များသည်လည်း
ဘလက်ချော သည် မည်သည့်ဇိမ်ခံပစ္စည်းကိုမှ ပိုင်ဆိုင်မထားသေးပါကြောင်း။
ဒါဆို ကို ဘလက်က ကောင်မလေးချောချောလေး တစ်ယောက်တောင် မရှိဘူးပေါ့…
ကဒ် ပုံတူပွားမ တွေ ပွားထီးတွေလဲ ကျန်နေသေးတယ်…။
ကားလဲရှိ ဘေလ်ထွက်မှပေးရတဲ့ ဖုန်းလဲ ရှိတယ်ဆို….။
miss call ပေးထားတယ်